Waraanni hamaa Mooyyalee keessatti deemaa jira. Humni Garrii Oromootti bobbaatee jirti. Mudde 17, 2018. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaraanni hamaa Mooyyalee keessatti deemaa jira. Humni Garrii Oromootti bobbaatee jirti. Mudde 17, 2018.
Waraanni hamaa Mooyyalee keessatti deemaa jira.
Humni Garrii Oromootti bobbaatee jirti.
Mudde 17, 2018.
Magaalan Mooyyale Ibidaan gubata jirti . Raayyan Ittissa taahe daawata Jira. Ummannii keenya Kumaatamaan Mana jireenya issa irraa buqaafame rakkoo hamaa keessa jira . Yaa Oromoo Akkumma Kaleessa woliif haa dirmanu . Obboleewwan keessan rakko akkaan hammatta keessummeessa jiru .Balbala Tokkocha qabnu dhabuuf deemna .
An hangan of beekutti beekumsa Tigiriffaa qabuun hamaa jarri afaan jaraatiin nurratti kataban hiikeen saba kiyyaaf dhiheessa. Faallaa kanaan garuu qaamni afaan kana beeku wayii Oromoo keessaa waan jaraaf hojjetaa jiru natti fakkaata. Yookiis jara keessaa kan afaan keenya barate tahuus mala, hin beeku. Garuu qaamni waan nuti afaan keenyaan wal qoccolaa jirru daqiiqaa daqiiqaatti hiikeefii aktivistoota jaraaf dhiheessaaru akka jiru argaan jira. Qoccoloo keessa keenyaa garii osoo nutuu hin dhagahin aktivistoonni Tigiree quufanii achii as nuuu gabaasaa jiru. Qaawwa banames itti ejjetanii gargar fofottoqsanii nu seenaniiru. Kan ifa biiftuu Oromoon arge kana dukkanatti jijjiiruuf fiigaa jirtu hojii kee nyaadhu!!
OMN GUYYAA MUDDEE 17, 2018
Rakkoon nu fuldura jiru nu ceesisa malee dubatti nu deebisu jedhan Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahmad. Itiyoophiyaa keessatti yakka hojjate seeratti kan hin dhiyaannes hin jiru jedhan.
sirbii kun duraanis OPDOF sirbamee amma yaadaanno isiinif haata’u yaa uummataa oromoo